ग्यास्ट्रिक के हो ? किन हुन्छ ?ग्यास्ट्रिक भएकाले ध्यान दिनुपर्ने ६ कुरा ! - Hamro Kalam
Home मुख्य खबर ग्यास्ट्रिक के हो ? किन हुन्छ ?ग्यास्ट्रिक भएकाले ध्यान दिनुपर्ने ६ कुरा !
ग्यास्ट्रिक के हो ? किन हुन्छ ?ग्यास्ट्रिक भएकाले ध्यान दिनुपर्ने ६ कुरा !
झन्डै ८० प्रतिशत नेपालीलाई कुनै न कुनै बेला ग्यास्ट्रिक लागेको अनुमान छ । सबै समुदाय र उमेर समूहका मानिस ग्यास्ट्रिकबाट पीडित भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
विशेष गरी नियमित सन्तुलित भोजन गर्ने अनि बढि चिल्लो, पिरो र अमिलो खानामा कमि गर्नाले ग्यास्ट्रिकको समस्या नहुने सम्भावना बढि हुन्छ। कसै-कसैले अल्छि गरेर अथवा नभ्याएर ३/४ दिनसम्म पनि खाना नखाई बसिरहेका हुन्छन्, त्यस्तो व्यक्तिलाई ग्यास्ट्रिक हुने पक्का हुन्छ।
ग्यास्ट्रिक हुँदा छाती र पेटको बीचको खाल्टो वरिपरि दुख्ने, पेट पोल्ने, भोक नलाग्ने, अम्लपित्त बढ्ने, पेट भारी हुने, रिङटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, पेट फुल्ने जस्ता लक्षण देखा पर्छन् । कसैलाई वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, डकार आउने, बान्तामा रगत देखिने, कालो दिसा आउने, खाना नपच्ने, पेट हुँडल्ने र तौल घट्दै जाने लक्षणसमेत देखिन्छ ।
आमाशयका भित्तामा ‘इन्फ्लामेसन’ (सुन्निएर रातो भएर दुख्ने समस्या) भयो भने पनि त्यो ग्यास्ट्रिकमा परिणत हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
मदिरा तथा धुम्रपान जन्य पदार्थको सेवन, बढी मात्रामा चिया–कफि पिउने बानी र कार्बनिक पेय कोक, पेप्सी आदि खानेहरूमा पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या देखिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । यसैगरी, पेटको शल्यक्रिया, कलेजो, मृगौला, फियो तथा आन्द्राका रोग र एचआईभी एड्स संक्रमित बिरामीलाई पनि ग्यास्ट्रिकले सताउँछ ।
सडकबाट आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गर्ने विपक्षी नेता गुआइदोलाई देश छाड्न प्रतिवन्ध
नेपाली भूमिबाट कुनै किसिमका चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने थापाको प्रतिबद्धता